ग्राफिक कार्ड के हो थाहा पाउनुहोस्, यसले कसरी ल्यापटप गेमिङ्गलाई फास्ट बनाउँछ बुझ्नुहोस् - Technology Khabar
» टिप्स » ग्राफिक कार्ड के हो थाहा पाउनुहोस्, यसले कसरी ल्यापटप गेमिङ्गलाई फास्ट बनाउँछ बुझ्नुहोस्
Technology Khabar १२ पुष २०७७, आईतवार
आजको युग टेक्नोलोजीको युग हो। प्रत्येक दिन मोबाइल, कम्प्युटर वा ल्यापटप नयाँ टेक्नोलोजीसहित बजारमा आउने गर्दछन्।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं कुनै नयाँ ल्यापटप वा कम्प्युटर लिन जानुहुन्छ भने, तपाईं साधारण ल्यापटपको तुलनामा ग्राफिक कार्ड भएको ल्यापटपको मूल्य अलि बढी पाउनुहुनेछ। यद्यपि ग्राफिक कार्डहरू सबै कम्प्युटर र ल्यापटपमा आउँछन्, तर मेमोरीको भिन्नताका कारण तिनीहरूको मूल्य पनि भिन्न हुन्छ।
मानौं यदि तपाईंले एक साधारण ग्राफिक कार्डको साथ ल्यापटप वा कम्प्युटर किन्नुभयो भने तपाईं यसलाई कम मूल्यमा पाउनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाई २ जीबी मेमोरी वा अधिक मेमोरीको साथ ग्राफिक्स कार्डको साथ ल्यापटप वा कम्प्युटर किन्नुहुन्छ भने, तपाईले अधिक रकम तिर्नु पर्छ। अब तपाईको दिमागमा यो प्रश्न उठेको हुनुपर्दछ कि यो ग्राफिक कार्ड के हो र यसलाई के का लागि प्रयोग गर्दछन्, जसको कारण कम्प्युटर वा ल्यापटपको मूल्य महँगो हुन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई एउटा ग्राफिक कार्ड के हो र यसको प्रयोग बारेमा बताउनेछौं।
ग्राफिक कार्ड के हो ?
ग्राफिक कार्ड एउटा इलेक्ट्रोनिक कार्ड वा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हो जुन कम्प्यूटर वा ल्यापटप बाहेक अन्य स्मार्टफोनमा राखिएको हुन्छ। कम्पनीको तर्फबाट, ग्राफिक कार्ड ल्यापटप वा कम्प्यूटरको मदरबोर्डमा इनबिल्ट हुन्छ। तर यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं बजारबाट बाह्य ग्राफिक कार्ड ल्याएर पनि तपाईंको कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ।
ग्राफिक कार्डको प्रयोग के हो ?
आजकल, हरेक कम्प्युटर वा ल्यापटप ग्राफिक कार्डसहित सुसज्जित छ। ल्यापटप वा कम्प्युटरमा गेमिङ्ग वा प्रोसेसिङ्गको लागि यो कार्ड हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ गेमिङ्गको शौखिन हुनुहुन्छ वा यदि तपाइँ तपाइँको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा भिडियो सम्पादन जस्ता ठूला सफ्टवेयर चलाउन चाहानुहुन्छ, वा यदि तपाइँ भीएफएक्स प्रभाव सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ भने, ती सबैको लागि कम्प्युटर वा ल्यापटपमा छुट्टै ग्राफिक कार्ड हुनुपर्दछ।
ठूलो ग्राफिक कार्डको फाइदा
यो थाहा पाईराख्नुस की ग्राफिक कार्डहरू प्रत्येक कम्प्युटर वा ल्यापटपमा हुन्छन् । कुनैपनि भिडियोलाई सामान्य ग्राफिक कार्डबाट चलाउन सकिन्छ, तर ठूला किसिमका सम्पादन सफ्टवेयरहरु यसबाट चलाउन सकिँदैन। साधारण ग्राफिक कार्डको कारण ठूलो सम्पादन सफ्टवेयर ल्यापटप वा कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सकिँदैन् । र यदि यस्तो भएपनि तपाईंको सिस्टम ह्यङ हुनेछ। ठूलो ग्राफिक कार्डमा मेमोरी राम्रो हुन्छ, त्यसैले यो ल्यापटप वा कम्प्युटरहरूमा र्याम स्वतन्त्र हुन्छन् र राम्रोसँग चल्दछन्। सामान्य भाषामा भन्दा, ग्राफिक कार्ड कम्प्युटर वा ल्यापटपमा चलिरहेको भिडियो, खेलहरू र सम्पादन सफ्टवेयरको गति बढाउन प्रयोग गरिन्छ।
प्रकाशित: १२ पुष २०७७, आईतवार
सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दै हुनुहुन्छ? यी पाँच सावधानी अपनाउनु उपयुक्त